दलान नेपाल : January 2014
एकिकरण प्रति उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट
at 7:02 PM Posted by Dalan
तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना पार्टी विच जारी एकिकरणको प्रक्रिया प्रति फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट देखिएको छ । गत मंगलवार सदभावना पार्टीको पार्टी कार्यलयमा भएको कार्यदल र अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकपछि यादव अर्को बैठकका लागी समय दिन ईन्कार गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
एकिकरण प्रक्रिया लम्बयाउदा नाकारात्मक प्रचार
पछिल्लो चरणमा एकिकरणको प्रक्रियामा रहेका प्रमुख तीन मधेशी पार्टीहरुले औपचारिक रुपमा गृहकार्य थालेको एक महिना नाघेको छ । संविधानसभाको समानुपातिक नामावली बुझाएपछि यी तीन दलका शिर्ष नेताहरु औपचारिक रुपमै गृहकार्य थालेका थिए । त्यसो त संविधानसभाको प्रत्यक्षको नतिजा आए लगत्तै मधेशवाट काठमाडौ छिरेपछि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो त्यसको आन्तरिक तयारी वा छलफलमा जुटेका सुचनाहरु आउन थाले । तर अहिले सम्म पनि यी एकिकरणको घोषणा नहुदा वा घोषणमा ढिलाई हुदा वाहिर नाकारात्मक प्रचारहरु सुरु भएको छ ।
किन गच्छदार मोर्चा बनाउन सक्दैन्न ?
तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना विचको एकिकरणको चर्चा संगै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले केही साना मधेशी पार्टीहरु विच छुटै मोर्चा बनाउन लागेको हल्ला आयो । तर गच्छदारको त्यो प्रयास वास्तवमै हल्लामै सिमित हुन पुग्यो । शुरुमा तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावनाको एकिकरण भन्दा पहिला नै उक्त मोर्चाको घोषणा हुन लागेको समाचारहरु आयो । तर गच्छदारको उक्त प्रयास किन आखिर सफल हुन सकेन ?
कार्यदलद्धारा एकिकरणको खाका प्रस्तुत
यस्तो छ एकिकरणको खाका
तीन पार्टी सदस्य सम्मेलित गठित कार्यदलका संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन
१, नेतृत्वका स्वरुप
क, तीनो अध्यक्षेका अध्यक्ष मण्डल होगा जिस मे चक्रिय प्रणालीमे नेतृत्व होगा ।
ख, अध्यक्ष १ तथा २ कार्यकारी अध्यक्षका स्वरुप होगा ।
तीनो अध्यक्षोका सामुहिक निर्णय से कार्य सम्पादन होगा ।
२, संगठनका स्वरुप
क, राष्ठिय कार्य सम्पादन समिती
- १५ सदस्यीय
- ३१ सदस्यीय
ख, राजनितीक समिती
- तीनो पार्टीयो के पदाधिकारी सहित ६५ सदस्यीय –वढी मे )
ग, राष्टिय कार्यसमिती
- तीनो पार्टी के केन्द्रिय समिती के सदस्यसहित ३०१ सदस्यीय
- १५१ सदस्यीय
- १०० सदस्यीय होगा ।
३, सभी पार्टीयोके वरिष्ठ नेताका पदका भि सृजित होगा ।
४, पार्टीका नाम
- सदभावना लोकतान्त्रिक फोरम
- तराई मधेश सदभावना फोरम
- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
५, चुनाव चिन्ह
- तीन रडका
- २ रडका
बिचमे स्टार वा कुछ और
गजेन्द्र नारायण सिंह र आजको मधेश
at 5:39 AM Posted by Dalan
आज गजेन्द्र नारायण सिंहको आज १२ औ पुण्यतिथी । नेपाली राजनितीमा अहिले सर्वमान्य मुद्धा बनेको संघीयता, समावेशीता र नागरिकताको मुद्धालाई आधार बनाएर ०४६ सालमा सिंहले सदभावना पार्टीको स्थापना गरेका थिए । हर्क गुरुडको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सिंह लगायतका नेताहरुले सदभावना परिषद गठन गरेका थिए । गुरुडको प्रतिवेदनले मधेशीहरु भरतीय हुन भनेर आरोप लगाएका थिए । त्यसको विरुद्धमा गठन गरिएको सदभावना परिषद नै सदभावना पार्टीको रुपमा रुपानान्तर भयो ।
काहा चुक्दै छन महन्थ ठाकुर ?
गत साता तमलोपाकै एक वरिष्ठ नेताले यो पंक्तिकारसंगको भलाकुसारीमा भने ठाकुरजी वाट पार्टी चल्दैनन । मैलै किन, सबैले महन्थ ठाकुरलाई त्यत्रो महान नेताको संज्ञा दिन्छ, अनि कसरी फेरी चल्दैन भन्नुहुन्छ । फेरी एकिकरणको सवालमा पनि अहिले सबै मधेशी पार्टीहरु ठाकुरको नेतृत्वमा अघि वढने संकेत दिईरहेका छन । त्यस्तोमा तपाईले कसरी ठाकुरजी पार्टी चलाउनु सक्नु हुन्न भन्नुहुन्छ ? उनले भने यही कारणहरुका कारण ठाकुरजी पार्टी चलाउने सक्न हुन्न ।
एकिकरणका लागी किन उपेन्द्र यादव तयार ?
निर्वाचन पुर्व एकिकरणको बिषयमा सबै भन्दा वढी नाकारात्मक थिए, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तर अहिले सबै भन्दा वढी साकारात्मक देखिएका छन उनी नै । आज दिउसो उपेन्द्र यादवका दाहिने मानिने एक नेतासंग लामो भलाकुसारी भयो । उनलाइ शुरुमै मैले भने, होईन यो एकिकरण कसरी भईरहेको छ भनेर सोध्दा, उनी अली गम्भिर हुदै मलाई जवाफ दिए - हेर्नुस अहिले सबै भन्दा वढी एकिकरणका लागी उपेन्द्र यादव नै हतारिएका छन ।
हामी मैदान छाडेका छैनौ - महन्थ ठाकुर
तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफुहरु संघर्षको मैदानवाट पछि नहटेको बताएका छन । मधेश विद्रोहको सातौ बर्षगाठको उपल्क्षयमा तमलापाको भातृ संगठन तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ठाकुरले शासकहरु आफुहरुलाई मैदानवाट लखेटन खोजे पनि अन्तिम अवस्था सम्म आफुहरु लडीरह्ने र मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएरै छोडने दावी गरे ।
तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना विच एकिकरण हुदै
at 11:02 PM Posted by Dalan
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी विच एकिकरण हुने भएको छ । गएको मंगलवार ठाकुर निवासमा भएको उक्क्त तीनै दलको बैठकले एकिकरण गर्ने सहमती गरेको छ ।
बैठकमा तमलोपाको तर्फवाट अध्यक्ष ठाकुर सहित उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लाल, महामन्त्रीहरु सवेन्द्रनाथ शुक्ला र जितेन्द्र सोनल फोरम नेपालका तर्फवाट अध्यक्ष यादवसंगै महासचिव रामसहाय यादव र नेता शिवजी यादव तथा सदभावनाको तर्फवाट अध्यक्ष महतोसंगै सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, उपाध्यक्ष द्धय नरसिंह चौधरी र संजय साह सहभागी थिए । बैठकले एकिकृत नयां पार्टीको संगठानात्मक लगायत कामहरुको छिनोफानो गर्ने जिम्मा तीन वटै अध्यक्षलाई दिएका छन । र तीन ओटै अध्यक्षको बैठक आउदो आईतवार बस्दै छ ।
स्थानिय निर्वाचनको विपक्षमा मधेशवादी पार्टीहरु
at 4:12 AM Posted by Dalan
मधेशवादी पार्टीहरुले संघीयता नआउन्जेल र राज्यको पुर्नसंरचना नहुन्जेल स्थानिय निकायको निर्वाचनमा नजाने र निर्वाचन हुन पनि नदिने बताएका छन । हालै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले नाया सरकार बन्ने वितिकै आफुहरु स्थानिय निकायको निर्वाचनको तयारीमा जुटने बताएका थिए ।
किन निशानामा धनुषा ?
धनुषावाट २८ जना सभासद दोस्रो संविधानसभामा चुनिएका छन । काठमाडौ उपत्यका पछि यो संख्या सबै भन्दा वढी हो । आखिर सभासदको संख्यामा धनुषाको महत्व किन ? यो रेसमा सबै भन्दा अगाडी काग्रेस, एमाले, एमाओवादी देखिएका छन भने पुछारमा मधेशवादीदलहरु छन । प्रश्न उठछ काग्रेस, एमालेवाट मधेशका अरु जिल्ला भन्दा धनुषामै किन अगाडी ? जानकारहरुको अनुसार, धनुषावाट यतीको संख्यामा सभासद पाउनाले धनुषा अर्थात जनकपुरको राजनितीक महत्व यसले दर्शाउछ । भलही सभासदको संख्या वढनुमा एउटा प्रमुख कारण काग्रेस भित्रको गुठबन्दीको प्रभाव होला तर त्यो गुटबन्दीले पनि जनकपुरलाई नै किन केन्द्रमा राखिन्छ । यसको सिधा असर मधेशको राजनितीक प्रभाव संग जोडिएर देखिन्छ । जनकपुरको प्रभावले सप्तरी देखि सर्लाहीसम्मको राजनितीक हैसियतलाई दर्शाउने गरेको कतिपयको टिप्पणी हुन्छ । र त्यो आज देखि होइन कि ००७ देखि ०४६ हुदै ०६२,०६३ हुदै मधेश आन्दोलन सम्म देखियो । परम्परगत कारण खोज्ने हो भने ००७ र ०४६ मा काग्रेसको भुमिगत एउटा अखडा भएकाले यो क्षेत्रको राजनितीक महत्व आफनै स्थान छ भने मधेश आन्दोलनले जनकपुर सम्भावित मधेश वा मिथिला क्षेत्रको राजधानीको रुपमा अगाडी सार्यो त्यसले याहाको महत्व झन वढाएर लग्यो । र काग्रेस र एमाले यी क्षेत्रलाई कुनै पनि मुल्यमा मधेशवादी दलहरुको कब्जामा नजाओस भन्ने रणनिती अपनाए । एउटा दलविशेषले आफनो अनुकुलको रणनिती अपनाउनु आफनो ठाउमा नराम्रो भन्न मिल्दैनन ।
नेपाल एकिकरण हुनुपुर्व मधेश आफ्नै अस्त्विमा थियो । मधेशको तिरहुतिया सेना को डरत्रास गोरखा शासकलाई थियो । भौगोलिक रुपमा एकिकरण भएपनि भावनात्मक रुपमा मधेशको एकिकरण हुन सकेन । मधेशी समुदायसँग सौतेले व्यवहार गरियो । जसको परिणाम गोरखा शासक र अंग्रेजसँगको युद्धमा मधेशीहरुले गोरखा शासकसँग विद्रोह गरी त्यस युद्धमा मधेशीहरुले अंग्रेजहरुलाई सहयोग गरे । मधेशको सम्पूर्ण भू–भाग “इष्ट इन्डिया सरकारले कव्जा ग¥यो । १८१६ को सन्धि भयो । त्यस सन्धिपछि अंग्रेजहरुले मधेशको ठूलो भू–भाग राखे र सानो भू–भाग नेपाललाई फर्कायो । त्यो पनि दुई वटा शर्त राखी । पहिलो मधेशको यस भू–भागमा वस्ने धर्तीपुत्रहरुसँग विभेद गर्न नपाइने र दोश्रो गोरखा शासक अंग्रेजहरुसँग वफादार हुनुपर्ने । त्यस अवस्थामा पनि मधेशको यस सानो भागमा अंग्रेजहरुको झण्डा फहराउँथ्यो र मधेशी जनतामाथि कुनै प्रकारको कर गोरखा सरकारले उठाउन पाउँदैन थियो । त्यस वापत कम्पनी सरकारले गोरखा शासकलाई एकमुष्ट रकम दिन्थ्यो । पछि भारतमा अंग्रेज विरुद्धको विद्रोह भयो । त्यस विद्रोहमा गोरखा शासकले अंग्रेजलाई सघाए । त्यस वापत पुरस्कार स्वरुपम गोरखा शासकलाई मधेशको सानो भू–भाग जिम्मा लगाइयो । अनि कम्पनी सरकारले आफ्नो झण्डा पनि हटायो र कर पनि उठाउन दियो । अंग्रेजहरुले त्यस वखत पनि एउटा शर्त राखे । यहाँको मधेशीमाथि विभेद नगर्नु भनेर । त्यस वखत गोरखा शासकले स्विकार ग¥यो तर पछि आफ्नो व्यवहार विस्तारै परिवर्तन ग¥यो । विभेद हुन थाल्यो । त्यसको परिणाम हाम्रा पूर्वज भारतमा अंग्रेज विरुद्धको विद्रोहामा सक्रिया भए र लागे । त्यसैपनि भारतको ठूलो मधेश भू–भागमा वस्नेहरुसँग हाम्रो रोटी बेटीको सम्वन्ध थियो । भाषा संस्कृति एउटै थियो र भारतबाट अंग्रेजहरु भागे भने मानवताको नाताले हामी पनि सहयोग पाउँछौं र हामीले पनि नेपालमा न्याय पाउँछौं ।